Dhibcaha Klout dib ayaa loo cusbooneysiiyey ... waana jeclahay! | Martech Zone
Waxaan maqlay Klout xoogaa ka hor laakiin fiiro gaar ah ma siinin ilaa aan kula kulmay qaar ka mid ah kooxda Klout Las Vegas. Waan tijaabiyey waxaanan ogaaday in dhibcaha qaarkood ay dhiman yihiin. Tusaale ahaan, inbadan oo naga mid ah waxaan leenahay bogag badan, koontooyin fara badan, iyo taariikh khadka tooska ah oo taarikheedu ahayd toban sano… laakiin Klout saameyn kuma yeelan intaas oo dhan.
Markii ugu dambeysay ee Klout uu cusbooneysiiyo dhibcaha, way iga lumiyeen gebi ahaanba. Dhibcaha waxaa si toos ah u saameeyay waxqabadkii dhowaa… xitaa in ka badan sidii ay markii hore ahayd. Hoos udhaca dhibcaha aan i baray wax ku saabsan la dhaqanka bulshada. Marka waan iska daayay daawashada.
Klout hadda waxaan dhameeyay cusbooneysiin weyn oo natiijada ah waana la ciyaarayay tan iyo markii ay bilaabeen. Waxaan eegay kuwa wax raadiya, waxaan kormeerayay shabakadeyda, waxaanan isticmaalayay barnaamijka moobilada ee loo yaqaan 'Klout mobile' maalin kasta (waa wax balwad leh… hel). Hal muuqaal oo qabow ee barnaamijka mobilada ayaa ah inaad kuheli karto inaad muujiso dhibcahaaga nambarka digniinta ee barnaamijka laftiisa. Xitaa uma baahnid inaad furto barnaamijka si aad u aragto dhibcahaaga mar dambe!
Mid ka mid ah astaamaha aan ugu jeclahay waa waxa dhaca markaan dhagsado astaan ​​kale. Bogga firfircoon wuxuu dhab ahaantii soo saaraa muuqaal wanaagsan oo muuqaal ah oo muujinaya meesha aan ku xidhayo saamaynaha, mowduucyada, iyo aragtida kuwa saamaynta leh ee aan wadaagno. Tani waa wax cajiib u ah suuqgee kasta…. awoodda aad ku raadin karto mowduuc ama saameyn, iyo inaad fahamto meesha iyo sida loola xiriiro saameyntaas waa faa iido weyn oo lagu ballaarinayo gaadhistaada.
Weli waan jeclaan lahaa inaan arko Klout oo ku siinaya talooyin ku saabsan shabakadooda qaababka Klout. In kasta oo aan ku qanacsanahay in la iigu magacaabo Hoggaamiye Fikir, waxaan jeclaan lahaa in aan arko tilmaamo ama dhaqammo ugu fiican oo iga caawiya in aan si dheellitiran u yeesho habka aan u adeegsanayo baraha bulshada… laga yaabee in yar oo wadaag ah iyo ka qaybqaadasho Ma doonayo inaan jabsado dhibicdayda Klout, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan arko haddii aan hagaajin karo dabeecadayda oo aan Klout ii sheego inay shaqeyneyso iyo in kale.
Waa kan fiidiyowga Klout ee ku saabsan dhibcaha cusub a iyo horudhac ku saabsan Klout Moments oo dhowaan bilaabi doona:
Dhibcaha Klout hadda waxay kujirtaa in kabadan 400 signaal laga soo bilaabo toddobo shabakadood oo kala duwan waxaana maalin walba laga shaqeeyaa si loo cusbooneysiiyo Dhibcahaaga.
Sheegashooyinka: Magacaaga oo lagusoo qoro boostada ayaa muujineysa dadaal lagu doonayo in si toos ah aan kulaula macaamilo.
Jecel Ficilka ugu fudud ee muujinaya kaqeybgalka waxyaabaha aad abuurtay.
Comments: Falcelin ahaan waxyaabaha aad wadaagto, faallooyinka waxay sidoo kale muujinayaan kaqeybgal toos ah shabakadaada.
Macaamiisha: Tirinta macmiisha ayaa ah cabir joogto ah oo saameyn ku yeelanaya waqti ka dib.
Gidaarka posts: Qoraallada darbigaaga ku yaal waxay muujinayaan saameyn iyo hawlgal labadaba.
Asxaabta: Tirinta saaxiibtu waxay cabiraysaa gaadhista shabakadaada laakiin waxay ka muhiimsantahay sida shabakadaadu ugu mashquuliso waxyaabahaaga.
Retweets: Retweets waxay kordhisaa saameyntaada adoo u bandhigaya waxyaabahaaga shabakadaha raacsan ee fidsan.
Sheegashooyinka: Dadka raadinaya dareenkaaga adiga oo ku xusaya waa calaamad xoogan oo saameyn ah. Waxaan sidoo kale tixgelineynaa kala duwanaanshaha noocyada sheegashooyinka, oo ay ku jiraan "via" iyo "cc".
Liiska Liiska: Ka mid noqoshada liistada ay qoreen isticmaaleyaasha kale waxay muujineysaa aagaggaaga saameyn.
Followers: Tirinta raacayaashu waa hal qodob oo ka mid ah Dhibcahaaga, laakiin waxaan si aad ah u jecelnahay kaqeybgalka cabirka dhagaystayaasha.
Jawaabaha: Jawaabaha waxay muujinayaan inaad si joogto ah ugu mashquuliso shabakadaada waxyaabo tayo leh.
+ 1aad: Ficilka ugu fudud ee muujinaya kaqeybgalka waxyaabaha aad abuurtay.
Dib-u-wadaag Reshares-ku waxay kordhineysaa saameyntaada adiga oo u bandhigaya waxyaabahaaga shabakadaha fidsan ee Google+.
Title: Cinwaankaaga la soo sheegay ee 'LinkedIn' waa calaamad muujineysa saameyntaada dhabta ah ee adduunka waana mid joogto ah.
Xiriirinta: Garaafka isku xidhkaaga ayaa kaa caawinaya xaqiijinta saamayntaada dhabta ah ee dunida.
Soo-jeediyayaal: La-taliyayaasha shabakadaadu waxay ku darayaan calaamado dheeri ah wax ku biirinta ay LinkedIn ku sameyso Dhibcahaaga.
Talooyin la sameeyay: Tirada talo soo jeedinta aad ka tagtay ee la dhameystiray waxay muujineysaa awoodaada inaad saameyn ku yeelato dadka kale ee afar-geesoodka ah.
+ K helay: Helitaanka + K waxay kuu kordhineysaa Dhibcahaaga Klout iyadoo lagu xirey 90-kii maalmood ee wareega cabirka ah si loo ilaaliyo sharafta Dhibcaha.
Muhiimadda Bogga: Waxaa lagu cabiray adoo adeegsanaya algorithm PageRank ah oo ka dhan ah garaafka bogga Wikipedia.
Ku xirnaanshaha saamiga Outlinks: Wuxuu isbarbardhigayaa tirada xiriiriyeyaasha soo galaya bogga illaa tirada xiriiryada dibedda.
Tirada Xidhiidhada: Qiyaastaa wadarta tirada iskuxirayaasha soo galaya bogga.
Kudos to Klout dib u soo nooleynta… waxay bartilmaameed weyn u ahaayeen dadka warbaahinta bulshada ku nool sanadihii la soo dhaafay laakiin waxaan jeclahay in kooxdooda (kalgacal loo yaqaan Kloutlaws) ayaa wali isku dayaya inay soo saaraan hanaan fudud oo lagu ogaado laguna cabiro saameynta qadka.
Tags: sidee loo qiyaasaa kloutkloutgooldhalintawaa maxay goos gooska
Google: Subdomain ama Subfolder loogu talagalay Luqado Badan